राजनीति – Page 49 – Sawal Nepal ||The Power of Information
प्रचण्ड किन गए बाबुरामको शरणमा ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि माओवादीबाट अलग भएका नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग परामर्श गरेका छन् । शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि आफुले चाल्ने कदमका विषयमा उनले भट्टराईको सल्लाह लिएका छन् । उनले समस्या समाधानका लागि जति प्रयास गरेपनि आफुले गरेजस्तो नेदेखिएको र केही जटिलताका कारण अप्ठ्यारोमा परेको
किन मच्चियो दमक अस्पतालको बिषयमा बितण्डा ?
दमक/झापाको दमकमा जिल्ला स्तरको सरकारी अस्पताल आयो भनेर सबैले खुसियाली मनाए । सरकारी दमक अस्पतालमा निशुल्क ओपिडि लगायतका सेवाहरु पनि शुरु भए । तर अहिलेसम्म संस्थागत रुपमा काम हुन सकेन । यसको कारण हो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्तीको बिषय । यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय काँग्रेसको हातमा छ । त्यसमा पनि लोकप्रीय र जनप्रीय मानिएका युवा नेता
को बढि राष्ट्रबादी ? ट्रम्प, मोदी, पुटिन र ओली
भारतमा नरेन्द्र दामोदरदास मोदी उदाउनुमा उनको कट्टर राष्ट्रवाद प्रमुख कारण थियो । राष्ट्रवादलाई प्राथमिकतामा राख्ने अटल विहारी वाजपेयीका चेला मोदी हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघका उत्पादन हुन् । राष्ट्रवादलाई उच्च महत्व दिने स्कुलिङका मोदीले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठान्ने गर्छन् । चाणक्यबाट अति प्रभावित उनले कुनैबेला चीनको साथ लिएर गुजरातको विकासमा भूमिका खेले ।
एमाले परास्त गर्न खोज्ने आफै परास्त हुन्छन्–ओली
बिष्णुप्रसाद पोखरेल दमक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बद्नियतपूर्वक मूलकलाई अप्ठेरो अवस्थामा धकल्ने प्रयास भइरहेको र यसले गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्ने बताउनु भएको छ । उहाँले सरकार संबिधान कार्यन्वयनभन्दा पनि नेकपा एमालेलाई परास्त गर्ने छलछाममा लागेको जनाउदै यो सम्भव नभएको बताउनु भयो । शुक्रबार नेकपा एमाले प्रदेश नं. १ को
केपी ओली कसरी पक्राउ पर्नु भयो ?
(एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पञ्चायती सत्ताले १४ वर्ष भन्दा बढी जेलमा राख्यो । जेल भित्रको पनि जेलका रुपमा रहेको गोलघरमा समेत राखेर यातना दिइएका ओलीको जेलजीवनबारे उनीसँगै जेल बसेका नारद भारद्वज (वाग्ले)सँग बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।) पञ्चायतले २०२१ सालमा भूमिसुधार नीति ल्यायो । सबै भन्दा पहिला झापामा भूमिसुधार लागू भयो ।
७ ओटा प्रादेशिक सम्पर्क कमिटी गठन
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रादेशिक संरचनामा सबै पार्टी कमिटीहरुलाई पुनगर्ठन गर्ने क्रममा १४ ओटा अञ्चल सम्पर्क कमिटीहरु विघटन गरेको छ । एमालेले उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक ७२ जिल्ला सम्पर्क मञ्च समेटेर ७ ओटा प्रादेशिक सम्पर्क कमिटी गठन गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको विभागको बैठकले प्रदेश नम्बर ४ बाहेक अन्य ६ ओटा प्रदेशक सम्पर्क
स्ववियुको चुनाव आगामी फागुन १४ गते हुने निश्चित
काठमाडौं l नौ वर्षदेखि रोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनाव आगामी फागुन १४ गते हुने निश्चित भएको छ । त्यसनिम्ति प्रमुख राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघ/संगठनहरू एकमत भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । त्रिवि रेक्टर प्रा. सुधा त्रिपाठीले भनिन्, ‘हामी चुनाव तालिका चाँडै सार्वजनिक गर्दै छौं ।’
बालनिकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयमा न्यानो कपडा वितरण
दमक/ झापाको शिवसतासी–९ माइधारमा अवस्थित बालनिकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी युवराज घिमिरेले विद्यालयमा अध्यनरत २७ जना विपन्न विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरेका छन् । हिउँदको चिसो समयमा विद्यार्थीहरुलाई नियमित पठन–पाठनमा समस्या भएको भन्दै विद्यालयका पुर्वविद्यार्थी समेत रहेका युवा व्यवसायी घिमिरेले न्यानो कपडा वितरण गरेका हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्णवहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कपडा वितरण
मैले पैसा कमाउन राजनीति गरेको होइन : ओली
दमक/पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफु पैसा कमाउन नभई जनताको सेवा गर्न राजनीतिमा लागेको बताए। शुक्रबार झापाको तोपगाछि–३ स्थित महेन्द्र रत्न माध्यमिक विद्यालयको स्वर्ण महोत्सवमा बोल्दै उनले देश र जनताको सेवाका लागि राजनितिमा लागेको बताएका हुन्। उनले भने ‘मलाई पैसा कमाउन छैन, देशको विकास गर्न छ, देशको विकास म गर्छु, एमालेले